दक्षिण कोरियामा यसरी मनाइयो टोपी दिवस
अन्नपूर्ण सोमवार, पुस १७, २०७४ 1441 पटक पढिएको
कोरियामा रहेका नेपाली टोपी दिवस मनाउँदै । तस्बिर: अन्नपूर्ण
सउल : विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले अग्रेजी नयाँ वर्षलाई राष्ट्रिय टोपी दिवसका रुपमा मनाएका छन् । दक्षिण कोरियामा पनि राष्ट्रिय टोपी दिवसको अवसरमा यहाँ कार्यरत नेपाली युवाहरुले नेपाल चिनाउने अभियान दिएर पदयात्रा सम्पन्न गरेका छन् ।
नेपाली टोपी, दौरा सुरुवाल पहिरिएका झण्डै एक सय भन्दा बढी युवाहरुले राजधानी सउलको रेल स्टेशनबाट नाम्सान पहाडमा रहेको सउल टावर सम्म पदयात्रा गरेका थिए ।
ढाका टोपी लगाएका नेपाली युवायुवतीहरु करिब पौने घण्टा उक्त सउल टावर पुगेका थिए । टावर सम्मको पदयात्राका क्रममा नेपाली युवाहरुले ढाका टोपी, नेपालको पर्यटकीय स्थलका पर्चा पम्पलेट र नेपाल भ्रमणका लागि कोरियन र विदेशी पर्यटकलाई निम्तो समेत दिएका थिए ।
ढाका टोपी नेपालको राष्ट्रिय चिनारी समेत रहेकोले यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने आवाजका साथ पदयात्रा गरिएको अभियानमा सहभागी ज्ञानी मान्छेले बताउनु भएको छ ।
नेपालीको पहिचान गुम्ने खतराबाट बचाउनका लागि परदेशबाट भएपनि आवाज उठाउनु परेको सहभागी अर्का नेपाली युवाले बताउनु भयो । यस्तै सहभागी मध्ये अर्का एलबी श्रेष्ठले पनि नेपालको ढाका टोपी अन्य मुलुकको भन्दा युनिक पहिरन भएकोले यस्लाई संस्थागत गर्न र यसै मार्फत देशलाई चिनाउने अभियान अन्तर्गत अभियानमा सहभागी भएको बताए ।
यसैगरी टोपी, दौरा सुरुवालाई राष्ट्रिय पोशाकमा नयाँ बन्ने सरकारले संविधानमा संस्थागत गर्नुपर्ने आवाज पनि नेपाली युवाको छ । नेपालको रामबाट सामाजिक सञ्जालमा परिचित युवाले नेपालीको पहिचान युक्त पोशाक लोप हुने खतरा रहेकोले यसलाई जोगाउन सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने जोड दिनु भएको छ ।
यसैबीच दैनिक लाखौ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्ने उक्त पदयात्रामा भेटिएका पर्यटकलाई नेपालीले अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै नेपाल भ्रमण गर्न पनि आह्वान गरेका थिए ।
सञ्जय खत्रीसहितका नेपाली युवाले पर्यकटलाई नेपालका सुन्दर पर्यटकीयस्थल रहेका पर्चा पम्लेट पनि वितरण गरेका थिए । केही पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्न आतुर रहेको बताउँदै आगामी वर्षको टुर नेपाल रहेको योजना सुनाएका थिए ।
बुधवार, पुस १२, २०७४ साउदी अरब र युएईमा पनि मजदुरले कर तिर्नैपर्ने, रेमिट्यान्समा असर ?
बुधवार, पुस १२, २०७४ भूकम्पपीडितका नाममा कोरियामा नेपालीको ठगी धन्दा
महिलाको शव फेला 73
फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा ! 296
बाघको छाला र हड्डीसहित दुई पक्राउ 140